Baidoa Media Center » Murashax iyo Madaxdoon. (Qormo aad u xiisa badan)
Murashax iyo Madaxdoon. (Qormo aad u xiisa badan)
June 9, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Waa duni iyo waayaheed, waagii beryaaba waayihiis ayuu la beryaa, ummad weliba waxay ku waaberiisataa weji iyo nolol cusub, waa samaad ama waa dhibeed hadba wixii Weyne u qadaray, waqtiguna waa Macallin wuxuu ina barayaa dersi waaweyn oo mid weliba wacyigiisa wato.
Haddaba, waxaa dadku inta badan afka ku hayaa, inuu dalku u baahan yahay isbedel, illeen dadkii waa wadaMadaxweyne iyo Murashaxe, yaa dalka horumarinaya, oo hawlaha loo baahan yahay fulinaya? Bal is weydii, halkee ayaynu ka heli doonnaa hawlaha ina sugayaa masuuliyiintii fulin lahayd?.
Dalku miyuusan u baahnayn Waxgarad ilaaliya Shuruucda, Xeerarka iyo nidaam dalka u degsan, iyo Xildhibaanoaqoontooda leh? Dalku miyuusan u baahnayn Garsoor caddaalad ah oo eex ka fog, kalana saara madaxda dalka maamush iyo shacabka?